UN General Assembly New York wakporo na ndị ndu ụwa na-ekiri: "Unu ahọrọla mkpochapụ! Gịnị bụ ihe ngọpụ gị?"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Nzukọ Ezumezu UN bụ New York wakporo ebe ndị isi ụwa na-ekiri: “Unu ahọrọla mbibi! Gịnị bụ ngọpụ gị?”
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Sustainability News • Tourism • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Nzukọ Ezumezu UN bụ New York wakporo ebe ndị isi ụwa na-ekiri: “Unu ahọrọla mbibi! Gịnị bụ ngọpụ gị?”
Aïssa Maïga na-edekọ ụda olu maka dinosaur animated kọmputa nke na-egosi na obere ihe nkiri ọhụrụ maka mmemme mmepe UN anaghị ahọrọ mkpọsa iji kwalite mmata banyere mgbanwe ihu igwe. Foto: Simon Guillemin
N'ịgbaba n'ime nnukwu ụlọ Mgbakọ General, nke ama ama maka okwu akụkọ ihe mere eme sitere n'aka ndị isi si gburugburu ụwa, dinosaur ahụ na-amanye na-agwa ndị na-ege ntị nke ndị nnọchi anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị omeiwu nwere akpata oyi na mgbagwoju anya na "oge eruola ka ụmụ mmadụ kwụsịrị ime ngọpụ wee malite ime mgbanwe" nsogbu ihu igwe.
Ihe nkiri mbụ a ga-eme n'ime UN General Assembly.
Mmemme mmepe nke United Nations (UNDP) na-ebute dinosaur dị egwu, na-ekwu okwu n'isi ụlọ ọrụ United Nations iji gbaa ndị isi ụwa ume ka ukwuu maka ihu igwe.
N'ime obere ihe nkiri ewepụtara taa dị ka isi mmalite nke mgbasa ozi ụlọ ọrụ ọhụrụ 'Anaghị ahọrọ mbibi'.
"Ọ dịkarịa ala, anyị nwere asteroid," ka dinosaur na-adọ aka ná ntị, na-ezo aka n'echiche a ma ama na-akọwa mbibi nke dinosaurs afọ 70 gara aga. "Gịnị bụ ihe ngọpụ gị?"
Ihe nkiri mbụ a ga-eme n'ime UN General Assembly site na iji onyonyo sitere na kọmputa (CGI) na-egosi ndị ama ama zuru ụwa ọnụ na-ekwupụta dinosaur n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere ndị na-eme ihe nkiri. Eiza González (Spanish), Nikolaj Coster-Waldau (Danish), na Aïssa Maïga (French).
Dinosaur ahụ gara n'ihu pụta ìhè ka nkwado ego maka mmanụ ọkụ sitere na enyemaka ego - ego ndị na-atụ ụtụ isi na-enyere aka mee ka ọnụ ahịa coal, mmanụ na gas dị ala maka ndị na-azụ ahịa - bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya na ihu igwe na-agbanwe agbanwe.
Chee echiche banyere ihe ndị ọzọ niile ị nwere ike iji ego ahụ mee. Gburugburu ụwa, ndị mmadụ na-ebi na ịda ogbenye. Ị naghị eche na inyere ha aka ga-enwe nghọta karịa… ịkwụ ụgwọ maka mbibi nke ụdị gị niile? " dinosaur kwuru.
"'Ihe nkiri a na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị, ma okwu ndị ọ na-ekwu maka ya enweghị ike ịdị njọ karịa," Ulrika Modéer, Onye isi nke UNDP's Bureau for External Relations and Advocacy kwuru. "Onye odeakwụkwọ ukwu nke UN akpọwo nsogbu ihu igwe 'koodu na-acha uhie uhie maka ụmụ mmadụ.' Anyị chọrọ ka ihe nkiri ahụ na-atọ ụtọ, ma anyị chọkwara ime ka a mara otú ọnọdụ ahụ siri dịruru ná njọ. Ụwa ga-agbali elu na omume ihu igwe ma ọ bụrụ na anyị ga-eme nke ọma n'ichekwa ụwa anyị nchebe maka ọgbọ ndị na-abịa n'ihu. "
Mgbasa ozi na ihe nkiri UNDP na 'Anaghị ahọrọ mbibi' bu n'obi ime ka ìhè dị na enyemaka mmanụ ọkụ na otu ha si ewepụ nnukwu ọganihu n'ịkwụsị mgbanwe ihu igwe ma na-ebute enweghị ahaghị nhata site n'erite uru na ndị ọgaranya.
Nnyocha UNDP ewepụtara dị ka akụkụ nke mkpọsa ahụ gosiri na ụwa na-emefu ijeri US $423 dị ịtụnanya kwa afọ iji kwado mmanụ ọkụ maka ndị na-azụ ahịa - mmanụ, ọkụ eletrik nke a na-enweta site na ọkụ nke mmanụ ọkụ ndị ọzọ, gas, na kol.
Nke a nwere ike kpuchie ọnụ ahịa ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 maka onye ọ bụla nọ n'ụwa, ma ọ bụ kwụọ ụgwọ okpukpu atọ nke ego kwa afọ achọrọ iji kpochapụ oke ịda ogbenye zuru ụwa ọnụ.
Mgbasa ozi na ihe nkiri a na-atụ anya ime ka okwu ndị dị mgbagwoju anya na nka mgbe ụfọdụ metụtara ego enyemaka mmanụ ọkụ na ọnọdụ mberede ihu igwe ga-enwetakwu ohere. Site n'omume dị iche iche a na-akpọ ọha na eze ka ha mee, ebumnuche bụ ịkụziri ma nye ndị mmadụ olu gburugburu ụwa.
Emepụtara ihe nkiri ahụ 'Anaghị ahọrọ mbibi' na mmekorita ya na Activista Los Angeles (ụlọ ọrụ okike na-enweta ọtụtụ ihe nrite), David Litt (onye na-ede okwu Onye isi ala US Barack Obama) na Framestore (ụlọ ihe okike n'azụ James Bond, Ndị nche nke Galaxy, Avengers End Game). Wunderman Thompson wuru gburugburu dijitalụ maka ebumnuche inye ndị mmadụ ike gburugburu ụwa ka ha mee ihe ebe Mindpool rụpụtara ngwa ọrụ ọgụgụ isi mkpokọta maka ikpo okwu mkpọsa ahụ.
PVBLIC Foundation, ụlọ ọrụ ọhụrụ na-anaghị akwụ ụgwọ nke na-achịkọta mgbasa ozi, data, na teknụzụ maka mmepe na-adigide na mmetụta mmekọrịta ọha na eze gburugburu ụwa, na-enye usoro mgbasa ozi na nkwado mgbasa ozi. Akara ngwa ngwa na-adịgide adịgide BOTTLETOP na ngagharị #TOGETHERBAND ha na UNDP na-emekọkwa ihe, ha na Speto onye Brazil na-ese ihe ga-erite uru na mkpọsa ahụ.
Chọpụta ihe gbasara mkpọsa na www.dontchooseextinction.com